လုပ်ငန်းတွေ အရှိန်အဟုန်ရပ်တန့်မသွားစေပဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် Cloud SAP System : Access Spectrum
ERP System, Products, SAP
လုပ်ငန်းတွေ အရှိန်အဟုန်ရပ်တန့်မသွားစေပဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် Cloud SAP System
COVID-19 Pandemic ဟာ တကမ္ဘာလုံးကစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုမျိုးကိုကြုံရသည်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဖူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဝယ်ယူသူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်သူ(stakeholder)တွေ နှင့် နောက်ဆုံးစီးပွါးရေးအတွက်အချက်အချာကျတဲ့ supply chain တစ်ခုလုံးပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေဟာပုံမှန်အတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဆိုသည်မှာလည်း နောက်ကွယ်ကစဉ်းစားရန်အချက်များစွာကရှိနေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေး ကအစ ဈေးကွက်အတွင်း demand အခြေအနေ များကိုမျက်ခြေမပျက်ပဲဆက်လက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်တွင်လုပ်ငန်းအတွင်းက stock management, inventory management, Sales & Distribution Data များ ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည့် centralized စနစ်၏အရေးပါမှုများကသတိပြုစရာဖြစ်လာသလိုပစ္စည်းတစ်ခုစတင်ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ဈေးကွက်ထဲသို့တင်ပို့ရောက်ရှိသွားသည့်အချိန်အထိ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ငန်းတွေကထွက်လာတဲ့ဒေတာတွေကိုသိရှိနိုင်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရာအတွက် အဓိကအရေးပါတဲ့အချက်တွေပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ဒေတာတွေကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ပြီး ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာ task တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရာကလည်း လုပ်ငန်းအတွင်း ယခုလို Workforce အပြည့်လည်ပတ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာဆို ပိုတောင်အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာတွေကို Cloud SAP System က ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Cloud SAP System ရဲ့အားသာတဲ့အချက်တွေကတော့
Real Time Data အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Efficient Operation (Mobility & Insights) ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့နေ့စဉ်သွားရောက်လုပ်ဆောင်နေရသကဲ့သို့အလုပ်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်ကိုင်နိုင်စေခြင်း
Control of Financials (Finance Module ပါဝင်တဲ့အတွက် Operation ပိုင်းသီးသန့်သာမကပဲ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေစာရင်းကို platform တခုတည်းအသုံးပြုပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း)
Digital Transformation ( Cloud base technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် တဖက်မှာ ရေရှည်အတွက် IT နှင့် Hardware ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျော့ချထားနိုင်သည့်အပြင် အနာဂတ်အတွက် Future-proof ဖြစ်သည့် Transformation တစ်ခုလုံးဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလည်ပတ်နိုင်ပြီးပြိုင်ဖက်တွေထက်ပိုမိုထိရောက်သာလွန်တယ့် digital supply chain, digital workforce အသွင်ကိုအမြန်ဆုံး ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း
Customized Reporting System ထို့အပြင် decision making လုပ်ရန် အတွက်စနစ်မှစနစ်တကျ analyze လုပ်ထားသော report များကိုဝေဖန်သုံးသပ်၍လည်းလုပ်ငန်း၏ရှေ့ဆက်မည့်အခြေနေအလားများကိုလည်းခန့်မှန်းသုံးသပ်နိုင်ခြင်း
လက်ရှိလုပ်ငန်းမှာသုံးနေတဲ့ software အမျိုးမျိုးကထွက်လာတဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒေတာတွေကို consolidate လုပ်ပေးနိုင်ပြီး Team တစ်ခုလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် Cloud SAP System မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Cloud Base ERP စနစ်ကို လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကကူညီပေးရန်အသင့်ရှိနေပါသည်။
အခြား SAP Software Solutions များအကြောင်း သိရှိလိုပါက ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
မိတ်ဆွေတို့၏လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် အောက်ပါ contact များမှတဆင့်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Professional Consultant များနှင့် တစ်နာရီ စာအခမဲဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှူကိုရယူလိုက်ပါ။
Are you interested in using SAP?
This entry was posted in ERP System, Products, SAP and tagged Access Spectrum, Control of Financials, Digital Transformation, SAP Cloud ERP System.
SAP ERP for the Manufacturing Industry
7 Reasons Why You Should Invest in ERP System
Copyright © 2021 Access Spectrum. All rights reserved.